Maxaad ka ogtahay heshiiska cusub ee Puntland iyo Imaaraadka Carabta ay kala saxiixdeen? | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Maxaad ka ogtahay heshiiska cusub ee Puntland iyo Imaaraadka Carabta ay kala...
Maxaad ka ogtahay heshiiska cusub ee Puntland iyo Imaaraadka Carabta ay kala saxiixdeen?
Boosaaso (Halqaran.com) – Maamul goboleedka Puntland iyo Hay’adda Bisha Cas ee dalka Imaaraadka ayaa kala saxiixday heshiis wada shaqayneed oo oggolaanaya in Hay’adda Bisha Cas ee dalka Imaaraadku ay xafiis ka furato Puntland, si ay ugu fududaato arrimaha gargaarka bini’aadantinimo ee ay ka fuliso Puntland.
Maamulka Puntland ayaa asbuucyadan ka shaqeynaysay xaaladaha bini’aadantinimo ee ka dhashay roobabkii ka da’ay gobolada Puntland, waxaana jira Guddiyo Dowladdu u saartay arrimaha Gurmadka dadka ay roobabku saameeyeen.
Puntland iyo imaaraadka carabta oo heshiis kala saxiixday